Ukuphulukisa izakhiwo zalesi sihlahla se-equator kanye nezincomo zokusetshenziswa.
Isivakashi esingavamile: i-passionflower nokusetshenziswa kwayo emithini yomdabu
Izakhiwo zokwelapha ze-passionflower, izici zezitshalo
Imbali enhle kakhulu okuthiwa i-Passionflower, noma njengoba ibizwa ngabantu abafisayo, iphezulu kakhulu futhi ijabulisa iso ngezimbali zayo ezimhlophe, ezibomvu nezibomvu. Iqhakaza yonke ihlobo, futhi ekwindla inikeza izithelo, ubukhulu bayo obufinyelela ezinhlobonhlobo zeqanda lezinkukhu.
Ezingxenyeni zethu cishe akunakwenzeka ukuhlangabezana no-passionflower. Kwatholakala okokuqala eNyakatho Melika, futhi manje esendle kwenzeka emazweni afudumele: i-Asia, i-Australia ne-Polynesia, ngoba iyakuthanda kakhulu ukushisa nomswakama.
I-Passionflow ayikwazi ukujabulisa kuphela ngokubonakala kwayo okungajwayelekile, kodwa futhi iyasiza ukuqeda izifo ezihlukahlukene.
Leli limbali elikhulu (elingaphansi ngokuvamile elibizwa ngokuthi "pasiflora") lisiza ukuqeda ukuphazamiseka kwemizwa futhi kuthonya kahle ukulala, ukukhululeka kokulala.
Kunganciphisa ubuhlungu nama-cramp nge-rheumatism futhi kulungise izinga lama-hormone.
Ukukhishwa kwesitoreji esithathwe ngokutshala kuthathwa ngokuphazamiseka kwengcindezi yegazi, ikakhulukazi ukuze uyinciphise. Ngaphezu kwalokho, imbali imisa ngokugcwele umsebenzi wenhliziyo futhi ithinta kahle isimo semikhumbi.
Ngokuhlaselwa okuvamile futhi okunamandla kwe-asthma, abanye ochwepheshe emithi yendabuko ngisho batusa inhalation kusuka passionflower omisiwe.
Lesi sitshalo sisetshenziselwa ukuhlanganiswa namanye amakhambi. Ukuthuthukisa umphumela we-tincture kuya ku-passionflower, engeza ama-hops, i-wort yase-St John kanye ne-valerian.
Ukukhishwa kwe-passionflower kusiza abantu ekulwa nokudakwa ngokweqile. Nokho, le nqubo ithatha isikhathi eside futhi ukwelashwa kungathatha unyaka.
Imiphumela emibi kanye nokuphikisana
Naphezu kokuthi izidakamizwa kanye nezicathulo ezisekelwe kulo mbala exotic zingatholakala kunoma yiliphi ikhemisi, kunezinto ezithile ezivimbela ukusetshenziswa kwazo.
Ngokuzimela ukuqala ukwamukela izindlela ngaphandle kokubonisana kokuqala nodokotela kunqatshelwe abantu abanokuphulwa okukhulu ekusebenzeni kwemizimba yokugaya (izilonda kanye nesisu sangasese).
Ukwelapha izidakamizwa ezifisa ukwelashwa kuyaphikisana ngokuqondile kubantu abahlukunyezwa yi-arrhythmia ne-angina pectoris. Kungenjalo, izinkinga zempilo ezinzima zingenzeka.
Abazali abanikeza izingane zabo itiye kusuka emoyeni we-passionflower, nabo, kumele banakekele kakhulu. Lokhu kusebenza kubantu abane-pressure ephansi yegazi. Iqiniso liwukuthi isitshalo sinendawo yokwehliswa kwengcindezi yegazi.
Ukukhulelwa akufakiwe ohlwini lokuphikisana uma umthamo ongekho omkhulu futhi kuzoba nemvume kadokotela efanelekile.
Imithi esekelwe i-passiflora ayikaze ibekwe kubantu abane-atherosclerosis yezitsha ze-cerebral, iziguli ezinesifo senhliziyo nalabo abane-uric acid usawoti otholakala emzimbeni.
Iresiphi ethandwa kakhulu
Ngokuvamile, itiye lokukhathazeka isetshenziselwa ukwenza itiye, okusiza ngokuphazamiseka kwemizwa nokukhathazeka okuhlobene nokulala kanye nomsebenzi wokugaya ukudla.
I-isipuni yamakhambi omisiwe athululelwa engxenyeni yengilazi yamanzi abilayo futhi avunyelwe ukuma imizuzu eyishumi. Khona-ke uketshezi luhlungwa nge-strainer noma i-gauze futhi ludliwe njengetiyi enkomishini encane ngemva kwemizuzu engamashumi amathathu ngaphambi kokulala.
Umuthi wendabuko awunqabe ukusebenzisa ama-passionflowers. Ikhemisi lithengisa iziqephu zezitshalo, eziphuza amaconsi angamashumi amabili ngosuku ukuze zithuthukise.
Ukuze ungalimazi umzimba wakho, ungalokothi uqale ukuphulukisa ngezindlela ezilungiselelwe kusuka kule sitshalo wena ngokwakho. Ukwehluleka ukuhambisana nomthamo kungabangela imiphumela engathandeki futhi kuphazamise impilo yonke.
6 Izindlela Ezingavamile Zokugcina Ubuchopho Esimweni Esisebenzayo
Siqala ukushintsha namhlanje. Indlela eya emzimbeni onempilo
Ukupheka kwemithi yendabuko yokuphuza inhliziyo
Iziphi amagciwane ezizohlala zitholakala kuphi?
Ukwelashwa kwamakhambi omuntu we-neurodermatitis
Ukubamba itiye elimnyama
Izitshalo zangaphandle zezempilo
Ukunganakwa kwezokwelapha, amacala okuphila
Timati intombazane izoshada kanye namaphupho ngezingane
Izimbali zangaphakathi: i-zamia
I-Pangasius fillet ku-sesame isinkwa
Imodeli yaseBrazil Adriana Lima
Ukuphila komuntu siqu kaRobert Pattinson
Ukuzalwa kozakwethu: ngokumelene nokuphikisana
Ungafunda kanjani ukudoba?
Izinkinga zokuphila nezindondo - ingabe kukhona ubuhlobo?
Indlela yokwenza ikhadi likaKhisimusi ngezandla zakho, isigaba somfundisi nesithombe